आम्रपाली बायोटेकको मम्स ब्राण्डका नयाँ प्रडक्ट नेपाली बजारमा Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 02:49:07
जापानी समय : 06:04:07
Tag: आम्रपाली बायोटेकको मम्स ब्राण्डका नयाँ प्रडक्ट नेपाली बजारमा
आम्रपाली बायोटेकको मम्स ब्राण्डका नयाँ प्रडक्ट नेपाली बजारमा
नेपाली बजारमा ८ वर्षदेखि बिक्री वितरण भइरहेको भारतीय कम्पनी आम्रपाली बायोटेक इन्डिया प्रा लि अन्तर्गत मम्सका नयाँ ब्रेकफास्ट प्रडक्ट शनिबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
मम्सका नयाँ प्रडक्ट चोकोफ्लेक्स, चोकोफिल्स, मुसली र पोरिज नेपाली बजारमा औपचारिक रुपमा बिक्रीवितरण थालिएको हो ।आम्रापाली बायोटेक इन्डियाका चेयरमेन डा. अनिल कुमार शर्मा, निर्देशक द्धय रितिक सिन्हा र डा. स्वप्निल शिखा तथा सेल्स एण्ड मार्केटिक प्रमुख उपाध्यक्ष प्रभात कुमार सिं ले नयाँ प्रडक्टको संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए ।
राजधानीमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन र प्रडक्ट लञ्च कार्यक्रममार्फत् नयाँ प्रडक्टको बिक्रीवितरणसमेत शुरु गरिएको जानकारी दिइएको हो । मम्सका अचार, जाम, कर्नफ्लेक्स, जुस, सस्लगायतका ७२ भन्दा बढी प्रडक्टको कारोबार भइरहेको छ । मम्स कम्पनीका उत्पादन नेपाली बजारमा निक्सोन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रालि, सन्तोष भेराइटीज र प्रथम ट्रेड लाइन प्रालिले बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।
भारतमा फुड प्रडक्टमा सबैभन्दा धेरै कारोबार गरिरहेको आम्रपाली ग्रुपले भुटान, बंगलादेश र मिडिलइस्टका बिभिन्न देशमा आफ्ना उत्पादन बिक्रीवितरण गरिरहेको छ । निकट भविष्यमा नेपालमै प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्ने लक्ष्य मम्स ब्राण्डले लिएको छ । नेपालमा उत्पादन गरेर भारतका बिहारलगायतका प्रान्तमा कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको आम्रपाली ग्रुपका नेपालस्थित कन्ट्री हेड जनक ओलीले जानकारी दिए ।
ब्राण्ड एम्बासडरको रुपमा भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान महेन्द्रसिं धोनी रहेको मम्सका उत्पादनहरु नेपालका सबै जनरल स्टोर र सुपर स्टोरहरुमा उपलब्ध छन् ।
आम्रापाली बायोटेक इन्डियाका चेयरमेन डा. अनिल कुमार शर्माले नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध बिबिध कारणले नजिक भएकै कारण भारतमा भन्दा पहिले नेपालबाट आफ्नो प्रडक्ट लंच गरेको बताए ।
Posted in कर्पोरेट/पर्यटनTagged आम्रपाली बायोटेकको मम्स ब्राण्डका नयाँ प्रडक्ट नेपाली बजारमा